Shacabka Sacuudiga oo bilaabay in ay cuntada daruuriga ah keydsadaan.
0 Thursday June 27, 2019 - 21:49:45
Fagaare ku yaalla gobolka Shabeelaha Hoose ayaa waxaa galabta oo Khamiis ahayd lagu dilay nin 75 jir ah oo la oran jiray Abshir Maxamad Cabdi ka dib markii lagu eedeeyay inuu guursaday Cadeey Manuur Khaliif iyo hooyadeed Xaawa Cabdi Biille.
Daawo Video:Dowladaha Carbeed iyo Wiil uu sodog u yahay Trump oo qabtay shir lagu shirqoolayo Shacabka Falasdiin.
0 Thursday June 27, 2019 - 19:24:12
Magaalada Manaama ee dalka baxreyn waxaa lagusoo gaba gabeeyay shir lagu shirqoolayay shacabka Filasdiin.
Ciidanka Mareykanka oo sheegtay Mas'uuliyadda dilka ganacsade Aboow Cali Waardiyoow.
0 Thursday June 27, 2019 - 10:33:42
War rasmi ah oo kasoo baxay Taliska ciidanka Mareykanka qaaradda Afrika ee loo yaqaan (AFRICOM) ayuu ku sheegtay mas'uuliyadda duqeyn diyaaradeed oo maalin ka hor ka dhacday duleedka deegaanka Kuunyo Barroow.
Ciidamada Xukuumadda Alwifaaq oo Khaliifa Xaftar kala wareegay magaalo ku dhow caasimadda Liibiya.
0 Thursday June 27, 2019 - 07:53:57
Isbedello waaweyn oo dhanka maamulka ah ayaa ka xasilay Koonfurta magaalada Daraabulis ee caasimadda u ah wadanka Liibiya.
0 Wednesday June 26, 2019 - 16:58:44
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen degaanka tirsan Shabeelaha Hoose shalay abbaaro 05:00 (Shantii galabnimo)
0 Wednesday June 26, 2019 - 09:56:35
Gar aad naqaysid oo kugu noqonaysa ayaa jirta'e Farmaajo wuxuu yiraahdaa tuug iyo musuq maasuq shisheeye raac iyo qabyaaladeyste layma tusi karo ee isagu arrimahaas maka fayoowyahay?.
0 Tuesday June 25, 2019 - 20:23:03
0 Sunday June 23, 2019 - 09:04:06
Maxamad Cabdullaahi Farmaajo, Wuxuu ku dhashay Muqdisho sannadkii 1962-dii, saddax sano oo qura ayaana uga harsan da'da 60 sano jirka. Waxaa markii ugu horreysay la bartay Bishii Octobar 14-keedii sanadki 2010-kii, goortaasoo loo magacaabay ra'iisulwasaare. Balse waxaa si aad ah loo sii bartay…
0 Thursday June 20, 2019 - 18:05:14
0 Wednesday June 19, 2019 - 20:20:42
Muslimiinta Uyghurka ah ee Turkistanta Bari waxay wajahayaan ollole isir sifeyn ah oo aad u qalafsan. Waxaan wax ka taaban doonaa taariikhda Turkistanta Bari, marxaladaha uu soo maray gumeysiga shiinahu iyo sida ay uga falceliyeen Muslimiinta iyo caalamka kale.
0 Tuesday June 18, 2019 - 15:51:53
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska guud ee ciidamada dowladda Uganda ayaa lagu sheegay in markale uu isdilay sarkaal sare oo katirsan ciidamada Uganda ee duullaanka ku jooga dalka Soomaaliya.
0 Tuesday June 18, 2019 - 12:22:36
Kadib kulan ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayay beesha Baciidyahan ku go'aamisay in ay qaadatay ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Dilal ka dhacay Magaalada Kismaayo iyo Axmed Madoobe oo lagu Eedeeyay in uu shirqoollo u maleegayo Siyaasiyiinta Mucaaradka ku ah.
0 Tuesday June 18, 2019 - 08:24:01
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in dilal qorshaysan ay saacadihii lasoo dhaafay ka dhacayeen xaafado katisan magaaladaasi.
Melleteriga Suudaan oo Dad Shacab ah dilay iyo Shaqa Joojin guud oo lagu dhawaaqay.
0 Monday June 10, 2019 - 11:46:35
Iska hor'imaadyo rabshado wata ayaa markale dib uga bilaawday wadanka Suudaan maalmo kadib markii ay ciidamada Melleteriga xasuuq ugeysteen dadka shacabka ah ee kacdoonnada wada.
0 Saturday June 08, 2019 - 11:04:08
Ismariwaa dhanka maamulka ah ayaa lagasoo sheegayaa magaalada Beled Weyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
0 Wednesday June 05, 2019 - 22:33:46
Mu'asasada Alkataa'ib oo ah garabka warbaahinteed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa baahisay qeybta 7aad ee silsiladda واغلظ عليهم 7
0 Monday June 03, 2019 - 17:29:05
Jamciyadda Kheyriga ah ee Al-ixsaan ayaa mashruuc raashin qeybin ah ka fulisay tuulooyin iyo degaano katirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
Dhageyso: Xalqada 23aad Ee Barnaamijka Halgankii Daraawiishta Sayid Max'med Cabdulle Xasan.
0 Wednesday May 29, 2019 - 16:33:29
Waa qeybta 23 aad ee Barnaamijka xiisaha badan ee Halgankii Daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulle Xasan.
Dowladda Mareykanka oo si yaab leh uga hadashay Khasaaraha ka dhashay gummaadka ay ka geysatay Caalamka islaamka.
0 Wednesday May 08, 2019 - 09:18:37
Warbixin cusub oo ay soo saartay wasaarada arrimaha Difaaca ee Mareykanka (The Pentagon) ayaa lagu sheegay in weerarada ciidamada Mareykanka ee sanadkii lasoo dhaafay ee 2018-kii ka dhacay wadamada Ciraaq, Afghanistan, Suuriya iyo Soomaaliya lagu dilay ugu yaraan 120 ruux oo shacab ah, lagu dhaawacay…
0 Tuesday May 07, 2019 - 09:23:33
kadib Kulan ka dhacay deegaanka Kuunya Barroow ayay beesha Biyamaal iyo Al Shabaab heshiis buuxa uga gaareen dagaallo ka dhacay deegaanno katirsan Sh/Hoose.
0 Tuesday April 16, 2019 - 11:39:25
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal istish-haadi ah oo ciidamada imaarada Islaamiga Afghanistan ay ka fuliyeen mid kamida gobollada uu ka holcayo dagaalka jihaadka ah ee wadanka Afghanistan.
Dowladda Federaalka Oo Muqdisho ka Mamnuucday Adeegga Aamin Ambulance.
0 Wednesday April 10, 2019 - 09:18:22
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka mamnuucday adeeg caafimaad oo muhiim u ahaa dadka danyarta ah.
0 Tuesday April 09, 2019 - 10:27:40
Waxaa cirka iskusii shareeraya xiisadaha udhaxeeya Muuse Suudi Yalaxoow iyo Cabdi Raxmaan Yariisoow oo dowladda Farmaajo ugu magacaaban guddoomiyaha gobolka Banaadir.
Maleeshiyaadka Dowladda Oo Qafaashay Imaamkii Masjidka Abaa Hureyra iyo Muslimiin kale.
0 Sunday April 07, 2019 - 19:21:05
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgallo raaf ah oo maleeshiyaadka dowlada Federaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka sameeyeen gudaha magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda halkaas oo tobanaan shacab ah ay ku qab qabteen.
0 Saturday April 06, 2019 - 20:17:35
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ciidamada shisheeye kasoo gaaray qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno katirsan gobollada Sh/Hoose iyo Jubbada Hoose.
0 Saturday April 06, 2019 - 10:59:53
Buug ay qortay haweeney wariya ah oo u dhalatay wadanka Holland ayaa sheegaya in Sheekh Mullah Cumar oo ahaa Amiirkii Xarakada Jihaadiga Taliban uu deganaa meel ku dhow saldhigga ciidama Marekanka ee gobolka Zabul wadanka Afghanistan arrinkaas oo fadeexad ku noqday isbaheysiga NATO.
Mareykanka Oo Qirtay in uu Dad Shacab ah ku dilay Duqeyn uu ka geystay Bartamaha Soomaaliya.
0 Friday April 05, 2019 - 21:19:25
Dowladda Mareykanka Ayaa qiratay wax yar oo kamid ah gummaadka ay ugeysanayso shacabka Soomaaliyeed iyadoo ku marmarsiyoonaysa ladagaallanka waxa argagaxisada loogu yeero.
0 Thursday April 04, 2019 - 12:33:49
Ciidamada Bangaraaf oo ay wehliyaan saraakiil Maraykanka ah ayaa xalay markale tacadiyo ka dhan ah dadka shacabka ah waxay ka gaysteen tuulada Ugunji oo hoostagta degmada Janaalle oo kamid ah degmooyinka gobalka shabeelaha hoose.
Laba Sano oo Kasoo Wareegtay Ka Bixitaankii Ciidamada Itoobiya Ee Magaalada Ceelbuur.
0 Thursday April 04, 2019 - 12:17:09
Muddo 2 sana ah ayaa kasoo wareegtay xilligii ciidamada Xabashida Itoobiya laga xureeyay magaalada Ceelbuur ee dhacda gobolka Galguduud bartamaha dalka Soomaaliya.
Dowladda Brunei Oo Sheegtay in ay Bilaabayso Tadbiiqinta Shareecada Islaamka iyo Reergalbeedka Oo Dhaleeceeyay [Warbixin].
0 Wednesday April 03, 2019 - 10:53:10
Hoggaamiyaha dowladda Brunei ayaa sheegay in uusan dhegna jalaq usiin doonin baaqyada uga imaanaya dowladaha reergalbeedka ee ka dalbanaya in uu joojiyo Tadbiiqinta shareecada islaamka oo maalinta berri ah ka bilaabanaysa dhammaan gobollada wadankaasi.
« Prev1 ... 567891011 ... 42Next »
16/06/2020 - 08:04:23
16/06/2020 - 06:46:53